Toetry ny andro : ho avy ny orana mandritra ny herinandro | NewsMada
Ho avy ny orana amin’ity herinandro ity fa ho maivana kosa ny refiny, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Halefaka ny orana saika manerana ny Nosy, indrindra ny tolakandro sy ny alina. Hanorana malefaka miatoato hatrany any Analanjirofo sy Antalaha. Tombanana ho maina kosa ny andro amin’ny faritra maro ny faran’ny herinandro. Amin’ny ankapobeny, tsy hihetsika ny maripana amin’ny morontsiraka andrefana. Hisy fidinany kosa izany amin’ny afovoan-tany sy ny morontsiraka atsinanana
Nandritra ny herinandro lasa teo, nahazo rotsak’orana araka ny tombana natao ny tapany atsimo izay nihoatra be amin’ny refiny tokony hoavy ho an’iny faritra iny, noho ny fisian’ny andro ratsy tao amin’ny lakandranon’i Mozambiaka. 200% ny habetsahan’ny orana ho an’Androy, Anosy sy Atsimo Andrefana.
Tany Sainte Marie, nandritra ny herinandro, nahatratra 113,9 mm ny refin’ny rotsak’orana amin’ny velarana iray metatra toradroa. Nahazo rotsak’orana be koa ny ilany afovoany andrefana sy atsimo andrefana, atsimo atsinanana. Narahana avandra mihitsy ny orana, ohatra ny tany Ampasambazaha, ny alahady hariva teo.